Uphando: Oku kunokuba sisizathu se'Fibrotine '- Vondt.net
Uphando: Oku kunokuba sisizathu 'senkungu yefibro'
22 / 07 / 2018 /0 Amazwana/i Intlungu engapheliyo, Amanqaku mfanelo/av ubuhlungu
Apha ungafunda ngakumbi malunga noko abaphandi bakholelwa ukuba sisizathu "senkungu yefibro" phakathi kwabo bane-fibromyalgia kunye novavanyo lwentlungu engapheliyo.
udinwe sisifo esinganyangekiyo esibuhlungu esibangela iintlungu ezibonakalayo kwimisipha kunye namathambo - kunye nokulala okungathathi ntweni kunye nokusebenza kwengqondo (njengememori). Ngelishwa, akukho lunyango, kodwa ngoku uphononongo lwakutsha nje lufumene elinye iqhekeza lephazili kwiphazili yeentlungu. Mhlawumbi olu lwazi lutsha lunokunceda ekuphuhliseni uhlobo lonyango? Sikhetha ukuba nethemba kwaye siyikholelwe.
Uphando lwakutsha nje luye lafumana ingqalelo enkulu ngenxa yokufumana kwabo uphando. Njengoko iyaziwa ngabo bachaphazeleka yi-fibromyalgia kunye noxilongo olunganyangekiyo lweentlungu, kungakhona iintsuku apho ingathi intloko 'ayixhonywanga' - oku kuhlala kubizwa ngokuba yi "fibrous fog" (okanye inkungu yengqondo) kwaye ichaza ukungakhathali kwaye umsebenzi wokuqonda. Nangona kunjalo, de kube kwesi sifundo, bekukho ulwazi oluncinci malunga nokuba kutheni abo baneengxaki zentlungu engapheliyo bechaphazeleka sesi sibonakaliso sibuhlungu. Ngoku abaphandi bakholelwa ekubeni kusenokwenzeka ukuba bayifumene inxenye yale phazili: eyile ngohlobo "lwengxolo yemithambo-luvo".
Abantu abaninzi bathwaxwa ziintlungu ezingapheliyo ezichitha ubomi bemihla ngemihla Kungenxa yoko le nto sikhuthaza ukuba Yabelana ngeli nqaku kwimidiya yoluntu, Zive ukhululekile ukuthanda iphepha lethu le-Facebook kwaye uthi: "Ewe kuphando oluthe kratya kwi-fibromyalgia". Ngale ndlela, umntu unokwenza ukuba iimpawu ezinxulumene noku kufunyaniswa kufumaneke ngakumbi kwaye aqinisekise ukuba abantu abaninzi bathathwa ngokungathí sina - kwaye ngenxa yoko bafumana uncedo abaludingayo. Siyathemba ukuba ukwanda kwengqwalaselo kungakhokelela kwinkxaso mali enkulu kuphando malunga novavanyo olutsha kunye neendlela zonyango.
Kolu phando, olupapashwe kwijenali yophando Indalo-IiNgxelo zezeNzululwazi, Abaphandi bakholelwa ekubeni ukungakwazi ukusebenza kakuhle kwengqondo nokubanakho ukugxila kungenxa yamanqanaba aphezulu kakhulu oko bakubiza ngokuba "yingxolo yovalo" - okt ukunyuka kunye nokuhamba kombane okutshabalalisa imithambo-luvo yokunxibelelana nokuthetha.
Isifundo sasinabathathi-nxaxheba abangama-40- apho izigulana ezili-18 zafunyaniswa ukuba zine-'fibromyalgia 'kunye nezigulana ezingama-22 ezazikho kwiqela lolawulo. Abaphandi basebenzise i-Electroencephalogram (EEG), eyimilinganiselo ye-neurophysiological, ukurekhoda umsebenzi wombane wengqondo. Emva koko balinganise imisinga yombane yeemithambo kwaye bathelekisa amaqela amabini ophando. Iziphumo abazifumeneyo ziyothusa- kwaye ziyakusebenza njengesinye isifundo sophando esixhasa ukuba kukho izinto ezibonakalayo emva kwe-fibromyalgia kunye nolunye ufumba lwentlungu engapheliyo.
Iziphumo zibonise amanqanaba aphezulu kakhulu "engxolo yovalo" phakathi kwabo bane-fibromyalgia-okt imisebenzi engaphezulu yombane, unxibelelwano lwentlupheko oluhlwempuzekileyo kunye nolungelelwaniso phakathi kweendawo ezahlukeneyo zobuchopho. Iziphumo zibonelela ngesiseko sokukwazi ukuthetha ngakumbi malunga nonobangela wento echazwa njenge "fibrous fog".
Isifundo singabonelela ngesiseko sonyango olutsha kunye neendlela zovavanyo. Ngale ndlela, uninzi lunokugcina imithwalo ebalulekileyo njengoko ihamba ngokubonakala ngathi kuphando olude olungenaziphumo. Ayizolunga na ukuba ekugqibeleni ungafumana izinto ezithile zokuxilonga kwabo banesifo esinganyangekiyo sobuhlungu?
Ngaba iYoga ingambuyisela kwakhona impazamo?
Inani lezifundo zophando sele zenziwe ezijolise kwiziphumo ze-yoga kwi-fibromyalgia. Phakathi kwezinye izinto:
Isifundo esivela ku-2010 (1), kunye nabasetyhini abangama-53 abachaphazeleke yi-fibromyalgia, babonisa ukuba ikhosi yeeveki ezisi-8 kwiyoga iphuculwe ngohlobo lwentlungu encinci, ukudinwa kunye nokuphucula imeko. Inkqubo yekhosi yayiquka ukucamngca, iindlela zokuphefumla, ukunyameka kweyoga kunye nemiyalelo yokufunda ukujongana neempawu ezinxulumene nesi sifo.
Olunye uphononongo lweemeta (ukuqokelelwa kwezifundo ezininzi) ukusukela ngo-2013 kwagqitywa kwelokuba iyoga yayinefuthe ekuphuculeni umgangatho wokulala, ukunciphisa ukudinwa kunye nokudinwa, kwaye oko kukhokelele kuxinzelelo oluncinci- ngelixa abo babandakanyekayo kolu phando bexela umgangatho ophucukileyo wobomi. Kodwa olu phononongo lukwathi akukho lwanele uphando olwenziweyo okwangoku ukuqinisekisa ukuba i-yoga yayisebenza ngokuchasene neempawu ze-fibromyalgia. Olu phando sele lukhangeleka ngathi luyathembisa.
Isiphelo sethu emva kokufunda izifundo ezininzi kukuba i-yoga ngokuqinisekileyo ingadlala indima kuninzi kwindlela epheleleyo yokuphelisa i-fibromyalgia kunye novavanyo lwentlungu engapheliyo. Kodwa sikwakholelwa ukuba iyoga kufuneka ilungelelaniswe nomntu-ayinguye wonke umntu oxhamla kwiyoga ngokuzolula kakhulu nokugoba, njengoko oku kunokubangela ukuphazamiseka kwimeko yabo. Into ephambili kukuzazi.
Funda: Oku ufanele ukwazi ngeFibromyalgia
Joyina iqela le-Facebook «I-Rheumatism kunye neNhlungu eziNgapheliyo - INorway: Uphando kunye neendaba»(Cofa apha) ukufumana uhlaziyo lwamva nje olwenziwe kuphando kunye nokubhala kwimidiya malunga nokuphazamiseka okungapheliyo. Apha, amalungu anokufumana uncedo kunye nenkxaso-ngalo lonke ixesha lemini- ngokutshintshana ngamava abo neengcebiso.
Zive ukhululekile ukubhalisa Kwitshaneli yethu - kwaye ulandele iphepha lethu kwi-FB kwiingcebiso zempilo yemihla ngemihla kunye neenkqubo zokuzilolonga.
Siyathemba ukuba olu phando lunokwenza isiseko sonyango lwe-fibromyalgia kunye nokufumana isifo esinganyangekiyo.
Kwakhona, sifuna ukwenza njalo buza kakuhle ukuba wabelane ngeli nqaku kwimidiya yoluntu okanye ngebhlog yakho (zive ukhululekile ukunxibelelana ngqo nenqaku). Ukuqonda kunye nokunyusa ukugxila linyathelo lokuqala eliya kubomi bemihla ngemihla obungcono kwabo bane-fibromyalgia.
I-Fibromyalgia sisifo esinganyangekiyo esibuhlungu esingaphazamisa kakhulu umntu ochaphazelekayo. Ukuchongwa kungakhokelela ekunciphiseni amandla, iintlungu zemihla ngemihla kunye nemiceli mngeni yemihla ngemihla engaphezulu kakhulu kwento uKari no-Ola Nordmann abanengxaki nayo. Siyakucela ukuba uyithande kwaye wabelane ngayo ngoku kugxilwe ngakumbi kunye nophando ngakumbi kunyango lwe-fibromyalgia. Uninzi lombulelo kuye wonke umntu othanda kunye nokwabelana- mhlawumbi singaba kunye ukufumana unyango ngenye imini?
Ukhetho A: Yabelana ngokuthe ngqo kwi-FB - Khuphela idilesi yewebhusayithi kwaye uyincamathisele kwiphepha lakho le-facebook okanye kwiqela elifanelekileyo le-facebook olilungu lalo. Okanye ucinezele iqhosha "SHARE" apha ngezantsi ukuze wabelane ngokubhaliweyo kwi-facebook yakho.
(Cofa apha ukuze wabelane)
Umbulelo omkhulu kuwo wonke umntu onceda ukukhuthaza ukuqonda okwandileyo kwe-fibromyalgia kunye nonyango olungapheliyo lokuqonda.
Inketho C: Landela kwaye ulingane Iphepha lethu le-Facebook (Cofa apha ukuba uyafuna)
UGonzalez et al, 2017. Ukunyusa ingxolo ye-neural kunye nokungqinelani kwengqondo engalunganga kwizigulana ze-fibromyalgia ngexesha lokuphazamiseka kwengqondo. Iingxelo zeSayensi Ivolumu 7Inombolo yeNqaku: 5841 (2017
IPHEPHA ELANDELAYO: -Uyazi njani ukuba uneNdawo yeGazi
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibrotåke-2.jpg?media=1648573622 449 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2018-07-22 13:40:542020-06-14 21:19:39Uphando: Oku kunokuba sisizathu 'senkungu yefibro'
Ubuhlungu ethangeni elingaphezulu: Unobangela, unyango kunye nokuthintela I-Fibromyalgia: Ngaba yintoni ukutya okufanelekileyo kunye nokutya kulabo abaneFibromyalgia?